ရခိုင်လူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အကြောင်း တစေ့တစောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Islam » ရခိုင်လူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Jun 14, 2012 in Islam, Science & Religion | 49 comments
ရခိုင်လူမျိုးများထဲက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အကြောင်း
ကမန် ဟူသည့် ဝေါဟာရမှာ ရှေးရခိုင်ဘုရင်အဆက်ဆက်လက်ထက်ကပင်
စတင်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့သည့် ရခိုင့်ဘုရင့်တပ်မတော်မှ သူရဲကောင်း လေးသည်တော်အ
ဖွဲ့ ၏အမည်နာမတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ရခိုင် သုတေသီတို့ ၏အဆိုအရ လေး၊မြှားအတတ်၌ ကျွမ်းကျင်သူ “လေးသည်တော်(ဝါ)လေးတော်ပစ်”ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရ၏။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာစတုတ္ထနှစ်မြန်မာစာအထူးပြု သင်ရိုးအမှတ် မ-၄၁၂၊ရခိုင်
မင်းသမီးဧချင်း ပို့ ချချက်အပိုဒ် ၃၃တွင်တွင်လည်း ကမန်ဆိုသည်မှာ လေးပတတ်ကျွမ်း
ကျင်သော စစ်သည်တော်ကိုခေါ်သည်။ရခိုင်တပ်မတော်တွင်လည်း လေးသည်တော်
တပ်ပါရှိရာ ၄င်းတပ်တွင်. အမှုထမ်းသူများအား ကမန်ဟုခေါ်သည် ဟုဖော်ပြထား၏။
ကမန် ဆိုသည်မှာ ယခင်ကလူမျိုးတစ်မျိုး၏ အမည်မဟုတ်ဘဲ ရခိုင်ဘုရင့်လေး
တပ်မတော် ၏အမည်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ရခိုင်မင်းနေပြည်တော် ပြိုကွဲပျက်သုဉ်းပြီး
နောက် အစုလိုက် အဖွဲ့ လိုက်နေထိုင်လာခဲ့ကြသော ရခိုင်လေးကိုင် သူရဲကောင်း အစု
အဖွဲ့ ကို ရခိုင်မျိုးနွယ်စု ကမန်လူမျိုးများအဖြစ် ယနေ့ ထက်တိုင်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာခဲ့ကြ
သည်။ရခိုင်ဘုရင် ဘစောဖြူလက်ထက်” ရခိုင်စာဆိုပညာရှင်အမတ်ကြီး အဒူမင်းညို
ရေးသားသော ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း အပိုဒ် ၃၃-၃၄”အရလည်း ရခိုင်ဘုရင့်လေးသည်
တော် သူရဲကောင်းတပ်ကို ကမန်လေးတပ်ဟု ခေါ်တွင်ကြောင်းတွေ့ ရသည်။
ကမန်မျိုးနွယ်စုမှာ ပြည်မနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြားမွတ်စလင်မ်များနှင့်
ရုပ်ရည်၊အပြောအဆို၊ယဉ်ကျေးမှုပါ အထူးကွဲပြားသော မျိုးနွယ်စုတစ်ုဖြစ်၏။ကမန်များသည် ရခိုင်များနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ဝတ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ မှု၊စကားအပြော
အဆို၊စိတ်နေစိတ်ထား၊ရုပ်ရည်ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ကွဲပြားခြင်းမရှိတူညီကြောင်း ဆရာတော်ဦးဥာဏရေးသားသော ဓညဝတီရာဇဝင်သစ်တွင် ဖော်ပြထား၏။ထို့ ပြင် ကမန်တို့ ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊စကားအပြောအဆို၊လေယူလေသိမ်းမှအစ ရခိုင်များနှင့် တထေရာတည်းဖြစ်သည်ဟု သတင်းစာဆရာ ယခင်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဟောင်း ဦးလှထွန်းဖြူက“ရခိုင် ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသား
ကမန် ဟူသော ဝေါဟာရမှာ ပါရှန်းဘာသာ စကားဖြင့် လေးနှင့်မြှားဟု အဓိပ္ပာယ်
ရသည်။G.E.Harvey\_Outline of Burmese History တွင် Kaman(Presian)=Bow and Arrow
ရခိုင်ဘုရင့်တပ်မတော်၏ ရခိုင်လူမျိုးများဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားသောလေးသည်တော်တပ်
ဖွဲ့ အား ကမန်လေးသည်တော်တပ်ဖွဲ့ ဟု ပါရှန်အမည် မှည့်ခေါ်ထားခြင်းအား ဆန်းစစ်
လေ့လာကြည့်ရာ အေဒီ(၇)ရာစုမှ (၁၅)ရာစုကြား တွင် ပါရှန်ကုန်သည်၊အာရပ်ကုန်
သည်၊ရောမကုန်သည်များသည် ရွက်သင်္ဘောများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ပသျှူး
ကျွန်းဆွယ်တို့ ကိုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် သွားလာနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း၊ထို
ကုန်သည်များသည် တရုတ်ကမ်းခြေများသို့ လဲရောက်ခဲ့ကြကြောင်း ၁၈၉၇ခုနှစ်
ဗြိတိသျှဗားမား ဂေဇက်အရသိရကြောင်း၊ထို့ ပြင် ပါရှန်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများသည်
မြန်မာနှင့်တကွအရှေ့ တောင်အာရှသို့ ရောက်နေကြပီဖြစ်ကြောင်းကို
A social economics and political geography of south east Asia by C.A.Fisher စာမျက်နှာ
ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ဆက်သွယ်ခဲ့သော
အချို့ သောရခိုင်မင်းများသည် (၁၅)ရာစုနှင့်(၁၆)ရာစု မှစ၍ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာ
သာဝင် များဖြစ်သော်လည်း ၄င်းတို့ အမည်များအပြင် အောက်ပါအတိုင်း ပါရှန်အမည်များ အစ္စလာမ်ဘွဲ့ များခံယူခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ နိုင်သည်။
(၁)မင်းခရီ(၁၄၃၄-၁၄၅၉)သည်. အလီခန် အဖြစ်
(၁)ဘစောဖြူ(၁၄၅၉-၁၄၈၂)သည် ကလီမာရှား အဖြစ်
(၃)မင်းဒေါ်လျှာ(၁၈၄၂-၁၄၉၂)သည် မေနုရှား အဖြစ်
(၄)ဘစောမင်းညို(၁၄၉၂-၁၄၉၄)သည် မိုဟာမက်ရှား အဖြစ်
(၅)မင်းရန်အောင်(၁၄၉၄-?)သည် နရီရှား အဖြစ်
(၆)စလင်္ကသူ(၁၄၉၄-၁၅၀၁)သည် ရှိတ်က် အဗ္ဗဒူ အဖြစ်
(၇)မင်းရာဇာ(၁၅၀၁-၁၅၂၃)သည် အီလီယမ်ရှား အဖြစ်
(၈)မင်းစောအို(၁၅၂၅–)သည် ဂျလာလ်ရှား. အဖြစ်
(၉)သဇာတ(၁၅၂၅-၁၅၃၀)သည် အလီရှား အဖြစ်
(၁၀)မင်းဘာကြီး(၁၅၃၁-၁၅၅၃)သည် ဇောက်ဘောက်ရှား အဖြစ်
(၁၁)မင်းဖလောင်း(၁၅၇၁-၁၅၉၃)သည် စကွန်ဒါရှား အဖြစ်
(၁၂)မင်းရာဇာ(၁၅၉၃-၁၆၁၂)သည်. စွယ်လင်ဆိုလိမ်ရှား အဖြစ်
(၁၃)မင်းခမောင်း(၁၆၁၂-၁၆၂၂)သည် ဟူစိန်ရှား အဖြစ်
မှီငြမ်း။။ရမ္မာဝတီ-ရမ်းဗြဲမြို့တောင်ကျောင်းဆရာတော် စန္ဒမာလာလင်္ကာရ ဆရာတော်
ကြီး စီရင်သော ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း ဒုတိယစာအုပ် ပဉ္စမတွဲ
Burma by D.G.E.Hall(Second Edition,1956)နှင့်
History. Of Burma by Sir Arther Phayra,1967
ရည်ရွယ်ချက်။။ရခိုင်လူမျိုးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ကမန်တိုင်းရင်းသား
တို့ မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၆၀၀)နီပါးကပင် ရှိနှင့်နေခဲ့ပြီးသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
တို့ ပင်ဖြစ်သည်ကို ပြောပြလိုခြင်း။
တနည်း အားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်လူမျိုးများထဲတွင် အစ္စလာမ်မရှိပါဟု သမိုင်း
မသိသေးဘဲ ပြောဆိုနေသည်ကို ရှင်းပြလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တော့ အဲ့လို စာတွေကိုစုံအောင်ရှာမဖတ်ဖြစ်တာကြာပါပြီး….
အချိန်ပေးပြီး အပင်ပန်းခံတဲ. ရည်ရွယ်ချက်လေးကို လေးစားပါတယ်..
ျ မှန်ပေစွ မှန်လိုက်ပေစွ သမိုင်းဟူသည် အတင်းငြင်းဆန်၍ လိမ်ညာ၍ မရသောအရာတပါးဖြစ်ချေ၏ အကျွန်တို့ ရက္ခိုင်ပြည်တွင် နေတိုင်ကြသူ တိုင်းသားဖြစ်စေ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်စေ လူသားအားလုံးတို့သည်ရက္ခိုင်ပြည်ရက္ခိတအမျိုးတို့၏ စစ်မှန်သော သမိုင်းတို့ကိုမြတ်နိုးတန်ဘိုးထားလျှက် စစ်မှန်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့၏ မှန်ကန်သောဦးဆောင်မှုကိုရနိုင်ဘို့ကျိုးစားကြပါကုန် သမိုင်းစစ်သမိုင်းမှန်ကိုသာ လက်ဆင့်ကမ်းကြပါကုန် မြတ်ဗုဓ္ဒ၏ သူတော်ကောင်းတရား ခုနှစ်ပါးနဲ့အညီကျင့်ကြံ့နေတိုင်ကြပါကုန် မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရကြသော တိုင်းတပါးသားတို့သည်လည်းမြန်မာ့ သမိုင်းကိုလေးစားတန်ဘိုးထားကြပါကုန်
သင်တို့ကြောင့်အမိမြန်မာပြည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် သိက္ခာမမဲ့ပါစေနှင့်
@Myo gye က ချီးမွမ်းလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
@memesekuရေ ထပ်ပြီးတော့ သမိုင်းစာအုပ်ထပ်လှန်
@ကိုဖိုးကြက်တောင်ရေ—-ကွန်မန့် လေးချီးမြှင့်လို့ ကျေးဇူးတင်သလို၊
ထင်သာမြင်သာ ထောက်ပြဝေဖန်ပေးလို့ ပိုပြီး ကျေးဇူးနော်။
ရခိုင် အမျိုးသား ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေ အကြောင်း သိလိုက်ရပါပြီ။
ဦးကျော်တင် အမန် ဆိုတာရှိပါတယ်။ တခါက ဗီယက်နမ် ပြန်လည် ညီညွတ်ရေး ပါတီ
မှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဗျာ ။ အစ္စလာမ်အလင်းမဂ္ဂဇင်းမှာလည်း အယ်ဒီတာပဲ ဗျ ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းနှီးပါတယ်
တခါက ကမန်တွေ အကြောင်းရှင်းပြဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော် သိတာ တခုရှိသေးတယ်ဗျ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်က ကုလား စစ်သီ ပျို များ
တျာချင်းဆိုတာ အဲ့ ဒါ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဘုရင့်တပ်မတော်က တပ်သားတွေ ခင်ဗျားပြောတဲ့ လေး တပ် အမြောက်တပ်ဗျ။
အခုလိုေ၇းပြတာ ကျေးဇူးပါဗျာ သမိုင်းးသိရတာပေါ့။
ဆရာထက်ရေ. ခုလိုဝင်ရောက်အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါဘဲဗျာ။
ခင်ဗျား လဲ မွတ်ဆလင် အနွယ်ဖွားများဖြစ်နေမလားလို့ထင်နေမိတယ်
မြန်မာမြေပုံမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရိုဟင်ဂျား မွတ်ဆလင်လူမျိုးတွေ
ပုံတွေထည့်ထဲက ဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် တွေအပေါ်ကြည့်မရဖြစ်နေတာ
ခုလဲကြည့်ပါအုံး.. ရခိုင် နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် တွေသောင်းကျန်းနေလို့
@ကိုရင်မောင်ရေ. ကျနော်ဒီပို့ စ်ကိုရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်(၂)ချက်ဘဲရှိတယ်။
(၁)ကျနော့် မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကမန်လူမျိုးတွေဟာ မဆီမဆိုင်
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာထဲဆွဲထည့်ခံနေရတာကို ဖြေရှင်းလိုတာရယ်၊ရခိုင်လူမျိုးမှာ
အစ္စလာမ်မရှိဘူလို့ ရမ်းဖြီးနေသူတွေကို သမိုင်းစာအုပ်ပြန်ဖတ် ခိုင်းလိုက်တာပါ။
(၂)ရိုဟင်ဂျာ တွေကြောင့် အများသူငါ မည်းမည်းမြင်တိုင်း ကုလားအော်နေတာ
အခုတလော စာအုပ်ပုံကြား အားတဲ့အချိန် ခေါင်းစိုက်နေပါတယ်။ ကျမလည်း ပြောပြချင်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော် ရေးဖြစ်မရေးဖြစ်တော့ အခြေနေအချိန်ခါလေး ကြည့်ပါအုန်းမယ်။ အချက်လက် အထောက်အထား စုံအောင် ဘက်စုံက ရသလောက် နှိုက်နေပါတယ်။ ခုရေးသလိုမျိုး ကျမလည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာ ဆိုတာထက် ဟိုအရင်တုန်းက သမိုင်းတခုကို ပြန်လှန်ကြည့်ချင်တဲ့သဘောနဲ့။ ဘယ်အချိန်တုန်းက ဘယ်လူမျိုးစုတွေ ဘယ်လို ဖြစ်တည်လာတယ် ဆိုတာလေးပါ။ ကိုစံလှကြီး ရေးပေးရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ခုတော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့လေ။ သွေးအေးသွားတဲ့ အခါမှပါ။
အချဲခံဂျင်ရို့ရေးဒယ် ချိုဒါ ဒါညိုးဂိုကြောဒါထင်ဒယ် (အထင်)
ဦးဖော……………..ဦးဗိုက်………………………..ဦးပု …. တို့၏ဇဂါးများ
ကမန်မကလို့ ကမန်ရဲ့ အဖိုးပဲဖြစ်နေပါစေ ဂရုမစိုက်ဘူးကွာ အဲ့ဒီင်္ကမန်ဆိုတာ အခု ဘာလူမျိုးကို ပြောတာလဲ အဲ့ဒါသိချင်တယ် အခု အဲ့ဒီလူမျိုး ငါတို့တိုင်းရင်းသားထဲမှာပါလား မပါရင် သမိုင်းကို ပြန်မလှန်နဲ့တော့ ဟိုးအရင်က ရှိခဲ့တာတွေပြောရရင် တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်ထက်ရှည်သွားမယ်
အခုဖြစ်နေတာက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ငါတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး ငါတို့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် ငါတို့နိုင်ငံက လက်ခံထားတဲ့ ဘဂါင်္လီလူမျိုးတွေသာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကိုလက်ခံ လက်မခံနိုင်ရင် ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ်လှီးပစ်လိုက် ရှင်းတယ်နော်
ကိုwinkhant ကမေးတော့လဲ ဖြေရတော့ပေါ့။ကမန်လူမျိုးဆိုတာ ရခိုင်လူမျိုးတွေထဲက တစ်ခုပါဘဲ။
မန်မာ အစိုးရသတ်မှတ်သည့် လူမျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ
“ဒေသခံ” တိုင်းရင်းသား ရခိုင်လူမျိုးမှန်ရင် မူဆလင်မဟုတ်ဘူးလို့သာ ဆိုလိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
မဆိုင်တာ မပြောပါနဲ့ မမသူသူရေ။သိသင့်သိထိုက်တာလေးကို သမိုင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရှင်းပြတာပါ။
ခုလိုချိန်မှာ မမpoochပြောသလို မရေးသင့်ဘူးဆိုတာလေးဆင်ခြင်မိပေမယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်း
မျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာ အစ္စလာမ်မရှိဘူးလို့ သမိုင်းကို မသိသူများပြောဆိုနေကြခြင်းကို ဖြေရှင်း
ကုလားဆိုဒ်တွေမှာ တွင်တွင်ဖတ်ခဲ့ရလို့ ရိုးတောင်နေပါပေါ့ အစ်ကိုရာ။
အစ်ကိုလဲ မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်ရင် ဒီလို(ပို့ စ်)တွေထပ်မတင်စေချင်ဘူးဗျာ။
နေ့လည်က ဖတ်ရင်းစိတ်မကောင်းရုံဘဲရှိတယ် ဘာမှဝင်မပြောတာ(မသောက်ရသေးတော့)။
ခုတော့ မရတော့ဘူး။အစ်ကို့ဘက်ကအဲလို စလုပ်ရင် ကျွန်တော်ဘက်ကလဲ ခံတိုက်ရမယ်နော်။
ညီအစ်ကိုချင်း အေးအေးနေချင်တယ်ဗျာ။ ခင်တဲ့………………
အင်. ပလုတ်တုတ် ကိုမိုးတိမ်ရယ် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေ
ထဲက သိသင့်သိထိုက်တာ ပြန်ပြောပြတာပါ။ဒါက ရှေးယခင်
ကတည်းကရှိပြီးသား မျိုးနွယ်စု တစ်ခုအကြောင်းကို ပြောလိုခြင်း
ဒီဆိုဒ်ထဲဂ အဖွားဂျီး တစ်ယောက်ရေးထားဒဲ့
ဘာလဲဗျာ ဒေါ် ဘာလဲမသိဘာဘူး ခင်မမမျိုးလား ဘာလားမပြောတတ်
အဲ့သည် ပို့စ်ကို ကျနော် လိုက်စာဒါ မတွေ့လို့လို့ဘာ
ကျေးဇူးပြုဘီး တင်ပေးဘာလား ( လင့်ဂိုပြောဒါဘာ )
ပြဿနာဂ အဲ့ဒါဂို ညွှန်းပြီးမှ ကော်မန့်ရေးလို့ရမဲ့သဘောမှာ စိလို့ဘာ
အနှီး အဲ့သည် အဖွားကြီး မ ခင်မမမျိုး ဟာ
အဲ့သည် ပို့စ်မှာသာ ရီပလိုက် ပြန်ပြောထားဒါဘာ
ကိုကမန်သားရေ…သမိုင်းရာဇ၀င်ဆိုတာက သမိုင်းဆရာကြီးတွေတောင် ဒုတ်ထမ်း ဓါးထမ်းပြီးအငြင်းပွါးနေကြရတာပါ
ရခိုင်အင်ပါယာကြီးထွားချိန်မှာ…စစ်တကောင်းနယ်တစ်ကြော(ယ္ခု ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် အပိုင် ) သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ
ကျနော်လဲလေ့လာခဲ့ဖူးပါတယ်..အခု အချက်အလက်တွေပြန်ရှာဖို့အချိန်မပေးနိုင်သေးလို့ ဒီအကြောင်းကိုမငြင်းတော့ပါဘူး
မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲမှာပါဝင်တဲ့.. ကမန် – ခါမီ – ဒိုင်းနက် – မြို – သက် ဆိုတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမှီတင်းနေထိုင်
လာခဲ့ကြတဲ့လူဦးရေနဲပါးတဲ့လူမျိုးစုတွေပါ..ကမန်လူမျိုး ကို ရခိုင်လူမျိုးပါလို့ပြောလိုက်တော့ ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်..
“ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သော ကမန်လူမျိုးအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအကြောင်းတစေ့တစောင်း” လို့ပဲရေးသင့်ပါတယ်။
ရခိုင်အရေးအခင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘာမှ အခုချိန်မှာ ၀င်မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ
ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာ အချိန်နဲ့ သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
တတ်နှိုင်တဲ့ အကူအညီတွေပေး၊ ခပ်အေးအေးပဲနေကြပါစို့။(ဘာမှန်း မသဲကွဲလို့)
တကယ်လို့ လိုအပ်လာရင်လဲ ဗမာ့သွေးက မကျဲပါဘူးဗျ။
တစ်ခုတော့ ခိုးချလိုက်မယ်(fb ကစာသားလေးကြိုက်လို့)
သေနတ်ကိုင် စစ်မတိုက်ရပေမယ့် လိုအပ်လာရင် ကီးဘုတ်ကိုင် တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ပြီးတိုက်မယ်…
ကိုဦး (ခေါ်ရတာရှည်လို့)ဆိုလိုချင်တာကို နားလည်ပါတယ်
ဒါမဲ့ ခုချိန်က နဲနဲများစောနေလားလို့
မှာတွေ့ဖူးလိုက်တယ် လူမျိုးမှာ ကမန်ဆိုတာမျိုးပေါ့
တကယ်ရှိမရှီဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်ကအဲဒါတွေသိပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူမဟုတ်တော့ မသိတာတကယ်ပါ
ဒါမဲ့ ပထ၀ီမှာသင်ဖူးတာတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေထဲမှာ မြို သက် ခမီ ဒိုင်းနက် အဲးဒါမျိုးလောက်ပဲတွေ့ဖူးတယ်
ကုလားသမိုင်းတွေဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရေးချင်ရေးမှာပေါ့ သူတို့က လိုချင်တာကိုး
ထားလိုက်ပါ ဒါတွေပြော ဒေါတွေပါမယ်
ဲဆရာဝင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော် ကျွန်တော် အဖွဲ့ထဲဝင်ဖြစ်တာ လေးရက်ပဲရှိသေးတယ်
ကျုပ်ရဲ့ ကော်မန့်ကို စောင့်စေခြင်ပါတယ် ခင်ဗျ
ကျုပ်ရှင်းမယ် ခင်ဗျားတို့ ဘာဖြစ်နေတာလဲ
လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက်နားလယ်လို့လဲ
လီးလိုလိုမှိုလိုလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ ( ကုန်ပါပြီ ကျုပ် စီဇိန်ဒေ )
သဂျီးဂို လိပ်စာ တောင်းထားဒယ်
ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ .. သံတွဲမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းဘဲမို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။
ဗျဝိဗျတ.. ရွှေဖျင်းညီနောင် စတဲ့သူအကြောင်းရေးပါဦးလား..
တောင်ပြုန်းကျသွားပြီး.. မွတ်ဆလင်ကျ.. မုန်းနေတဲ့.. ရှေးစွန်းစွဲတွေကို.. အံ့သြမိတယ်..။
.. မြန်မာတွေကုလားခေါ်တဲ့.. အိန္ဒိယသားတွေမှာ.. မွတ်ဆလင်က လူနည်းစုဖြစ်ပါကြောင်း.. ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအများစုဖြစ်ပါကြောင်း…
အဲ(ရွှေဖျင်းညီနောင်) စောက်ကုလားတွေကိုလဲ ဗမာတွေကပဲ ကယ်ဆယ်ခဲ့တာပါ။
ဘုန်ြး့ကီးကျောင်းမှာနေ ဘုန်းကြီးပစ္စည်းခိုးစား အားကြီးလာတော့ ဘာလုပ်တုန်းဗျ။
အဲလိုဘဲ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ တစ်စိတ်တည်းပဲ။ကျုပ်က နတ်မကိုးကွယ်တဲ့ အပြင် ကိုးကွယ်ရင်လဲဘာကြောင့် ကိုးကွယ်ရလဲဆိုတာ စစ်ဆေးမယ့်ကောင်။မှန်တယ်ထင်ရင်တော့ သူကြီးလဲမရဘူး။အိမ်ရှေ့ လာအော်မှာဘဲ။ဘာသာရေးနဲ့
ဆိုင်တာတွေ ခံနေရတာတွေအရမ်းများနေပြီ သူကြီးကအေးအေးနေ နှလုံးပြူးတိုက်ပြီး
We don’t accept only so called Rohinjar ( Bengali ). Not associate with Religious.
ကိုကျော်စွာခေါင် ကွန်မန့် အတွက် လေးစားသမှုပြုပါရစေ။ကျနော်လဲ စဉ်းစားစရာလေး
ထည့်ပေးတာပါ။စိတ်ဓါတ်လည်းကျပါတယ်။အကို ကွန်မန့် ထဲက စာသားလေးအချို့ “
တန်ဘိုးချင်းတော့ ကွာတယ်…ဟိုဆရာတွေက တတိုင်းပြည်လုံးက စာရေးဆရာတွေ ပို့ 
သမျှ စာမူတွေထဲက ကောင်းလွန်းလို့အယ်ဒီတာက ရွေးချယ်ပြီး ပုံနှိပ်တာ….။
ကျနော်တို့ ကတော့ ခုနကဘဲ အကောင့် အသစ်ဖွင့် အခု ပို့ စ်တင်..။
ကျနော်တို့ ရဲ့ ကလောင်တန်ဘိုး ဘယ်လောက်အဆင့်အတန်းရှိသလဲ…
အခု သားဦးမြေးဦးရေးတဲ့စာမှာ ကော်မန့် ဝင်ရေးပေမယ့် အရင် ရခိုင်ပြဿနာစကတည်းက
ဟိုမှာက လူတွေ့ ချတာ သေကုန်ပြီ… လူသားတိုင်းဟာ အသက်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ချည်းပါဘဲ””
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုကျော်စွာခေါင်ရေ .. ရွာမှာလည်း ၀င်ရေးပါဦး ..
ကိုကျော်စွာခေါင် ရေ….. ကြို ဆိုပါတယ်… ဒီရွာက ကြမ်းတယ်…. လက်သီးပုန်းတွေများတယ်…
ရေးတော့ရေး…. ဒါပေမယ်… ကွန်မန်.ကြမ်းကြမ်းတွေတွေ့နိ်ုင်တယ်လို့….ပြောချင်တာပါ… ဒီရွာထဲမှာက ဘာမှမစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပဲ ပြောကြသူတော်တော်များတယ်…
ဟလို memeseku ရေ ရွာက ကြမ်းတယ် လက်သီးပုန်းတွေ များ လို.တော့ ရမ်းမပြောပါနဲ.လားဗျာ… ပို.စ်ရေးသူဟာ နှစ်ချက်တော့ ကြိုစဉ်းစားထားသင့်တယ်… မြှောက်ပြောတာလဲ ခံနိုင်ရမယ်..ရှုံချဝေဖန်တာလဲ ခံနိုင်ရမယ်ဗျ……… ဒါလေးပြောချင်တာပါ…
ဘာမှ မစဉ်းစားပဲပြောကြသူတော်တော်များတယ် ဆိုပြီး အခုလဲ memeseku က ဘာမှမစဉ်းစားပဲပြောတဲ့သူထဲမှာ ပါနေပါပြီနောာာာာ.
memeseku ရေ မင်္ဂလာပါနော်။ ရွှေကြည်ကလည်းကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။
ဒါပေမယ့် ဒီရွာမှာ သဘောဆိုးပြီးပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကို ဆွေးနွေးတာမရှိသလောက်ပါ။
ကိုယ်ပြောချင်တာကို တဲ့တိုးတုတ်ထိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်ကြသူတွေရှိပေမယ့် မစဉ်းစားမဆင်
ခြင်ပဲ ပြောကြသူတော်တော်များတယ်ဆိုတာကိုတော့ စီနီယာများကိုယ်စားကန့်ကွက်ပါရစေ။
ယူတတ်ရင်ပညာတွေချည်းပဲဆိုတာ နားလည်ပေးပါနော်။ ဘက်စုံထောင့်စုံသောအတွေးတွေနဲ့စေတနာတွေကို
မြင်တတ်ရင် ကြည့်တတ်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခုကာလမှာတော့ ဒေါသကြောင့်သော်၎င်း၊
မခံချင်စိတ်အခံကြောင့်သော်၎င်း စကားတွေဟာကြမ်းချင်ကြမ်းပါလိမ့်မယ် နားလည်နိုင်အောင်
ကြိုးစားပေးပါ။ ကိုရွှေတိုက်ပြောသလိုပါပဲ အခုကိုယ်တိုင်က မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပဲ
ကိုရွှေတိုက်စိုး အကို့ကိုကျနော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်.. အကိုက ဒီဆိုဒ်ရဲ. အမာခံထဲကတစ်ယောက်ပါ .ပြီးခဲ့တဲ. ပိုစ့်တွေတုန်းက လီးလချီးနဲ.ဆဲတာတွေအကိုမြင်မှာပါ ကျနော်ကမစဉ်းစားပဲပြောတယ်ဆိုတာဘယ်အချက်နဲ့လဲရှင်း ပြပေးပါလား ကျနော့်ကွန်မန်.က၂ကြောင်း၃ကြောင်းရယ်… လက်သီးပုန်းတွေတကယ်များတာအကိုလဲသိပါတယ် တခုခုဆို… ၀င်ဝင်ဆဲကြပြီးရင်ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းကြနဲ.
အကိုတို.နဲ့တခြားအမာခံတွေမပါတာ ကျနော်သိပါတယ်… လက်သီးပုန်းတွေကိုဆိုလိုတာပါ…
မြောက်ပြောတာနဲ. ဝေဖန်ရှုံချတာ က ဆဲတာနဲ. မတူဘူးလို့ထင်ပါတယ်… (ဥပမာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသောက်ဂရုမစိုက်ဘူးလို့) စတဲ.ရမ်းကားတဲ. ကွန်မန့်တွေကိုတွေမိလို့ပါ အကို…
နောက်လဲ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ ကိုတိုက်…
အဲဒါကိုပြောတာပါ ဗျာ memeseku ရေ. စိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်ပါနဲ… ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အစ်ကို ဒီရွာကို ရပ်ကွက်တရပ်ကွက်လို.သဘောထားလိုက်ဗျာ…. ရပ်ကွက်ထဲမှာ မူးပြီး ဆဲနေတဲ့သူကို အစ်ကို က မဆဲပါနဲ.အစ်ကိုရယ်လို. သွားပြောရင် အစ်ကိုကို လဲ ဆဲမှာပဲလေ…. အဲဒါကိုပြောတာပါ…
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ရွာထဲမှာ ကို memeseku က ပို.စ်တစ်ခုတင်ရင် အဲဒီလို ဆဲခံရမှာစိုးလို… လက်သီးပုန်းတွေ ရှိလို. မပြောရဲမဆိုရဲ. ပို.စ်တင်ပြီး ကိုယ့်အမြင်ကို ရဲရဲ မပြရဲမှာစိုးလို. ပြောပြပေးတဲ့သဘောပါဗျ…
ကို memeseku ရေ ကျွန်တော်တို.ကဆွေးနွေးစရာမလိုအောင် နွေးထွေးပြီးသားပါဗျ………. ဟဟဟ
ဥပမာ အ ပေါ်က ကွန်မန့်ုကိုပဲကြည့်ကြည့်အကို…. အဲ.လို မကြမ်းတမ်းစေချင်တာပါ… စည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ကြပါတယ်….
ဒါတွေဟာ အခု အရေးအခင်းကာလမှာမှဖြစ်ပေါ်လာတာတွေပါ။ ဆိုဒ်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။
Shwekyiရေ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၆၀၀)လောက်ကဘဲရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာရယ်၊ဒီ ကျမ်းတွေကိုရေးသားသူ
တွေဟာရခိုင် ဆရာတော်တွေဆိုတာကို မမေ့သင့်ပါ။ကျေးဇူးပြု၍ သွားဖတ်ပေးပါဗျ။
@သူကြီး ကိုခိုင်ရေ တချို့ ကွန်မန့် များ ကျနော်ကိုယ် တိုင် ဖျက်လိုက်ပါသည်။နားလည်ပါမယ် မျှော်လင့်လျှက်ပါ။
@ကိုပုရေ—-ကိုပုက ဒေတာနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် ရေးပေးပါမယ်ဆိုလို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ခုလို ရှင်းပြမယ်ကြားရလို့ 
ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။ရှားရှားပါးပါး မို့ ပါ။
ကို သားဦးမြေးဦး ရေရွှေကြည်ပြောချင်တာ memeseku ကိုပြောချင်တာပါ။
ယခု ပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာ ဆွေးနွေးစရာမရှိပါ။ အဲလောက်လည်းလေ့လာလိုက်စား
ကေ၁၉ ရေ ဒီလို ကိစ္စတွေက သွေးရှိတိုင်းလုပ်လို.မရလို.ပါ အဲဒါကို နားလည်ပေးပါ…. သွေးရှိတိုင်းလုပ်ရရင် လက်နက်ရှိတဲ့သူတွေက လုပ်ပြီးလောက်ပီဗျ….
ကိုကိုရေ စိတ်ကလေးတွေကို နဲနဲထိန်းပါ…… တကယ်အရေးဆို သွေးရှိဖို.သာ ကျွန်တော်တို.ပြင်ဆင်ထားကြတာပေါ့ဗျ……..
shwe kyi ရဲ.ကွန်မန့်ကိုကျေးဇူပါ…
ရိုဟင်ဂျာ အခုတလောပြောဆိုနေတာအရဆိုရင် ဘင်ဂါလီ လူမျိုးတွေကအမှားလုပ်တာဟာ
မူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်)တွေအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင် တရားမျှတမှူရှိပါ့မ
အဲဒီလိုဆိုရင် ရိုးရိုးသားသားနေတဲ့မူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်)တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ(မူဆလင်)တွေကို
ရခိုင်မှာလဲ မူဆလင်ရှိတယ်။ (ပြောရရင်) ခရစ်စယန်လဲရှိမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါ ယူနီဗာဆယ်ထရုပါ။
(ဒီပို့စ်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ သဘောထားကိုအခုလိုရှင်းပြသင့်တယ်လို့ထင်နေ
ခက်နေတာကတခုဘဲ “ကျော်ဟိန်း” နာမည်ကြီးစဉ်က ကျော်ဟိန်းဘာလုပ်လုပ်လုပ်အကောင်းမြင်တာမျိုး။
အစွဲကြီးတဲ့ကျနော်တို့မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ “တယူသန်”က တ “ရန်သူ”လို့ သိမ်းကျုံးပြီး “ဆော်”လေ့ရှိတာတော့
(ကြုံလို့ပြောရရင်ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှက အသိတယောက်က ရိုဟင်ဂျာကမင်းတို့တိုင်းရင်းသားဘဲလို့ပြောတာကို
လည်ပင်းထညှစ်ချင်လောက်အောင် ဒေါပွပြီး ဒေါသသံနဲ့ အတင်းဇွတ်ညင်းတာ ဟိုကောင်မျက်လုံးပြူးပြီးတောင်းပန်
မှရပ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီလို )
ကိုVictory ရေ ကျနော်လဲ ကိုကြောင်ဝတုတ်၏သဘောထားအပေါ်အထူးသဘောကျမိပါတယ်။
အကို ကွန်မန့် လေးအတိုင်းပါဘဲ။ကျေးဇူးပါဘဲဗျာ။
““အဲဒီလိုဆိုရင် ရိုးရိုးသားသားနေတဲ့မူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်)တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ(မူဆလင်)တွေကို
(ဒီပို့စ်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ သဘောထားကိုအခုလိုရှင်းပြသင့်တယ်လို့ထင်နေ
ကမန် အကြောင်း စာအုပ် က စာပေဗိမန် စာမူဆုရဆိုပဲ စာအုပ်လဲမရှိ အမှတ်လဲမရှိလို့ နောက် မင်းလဲ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး ထုမှာဆိုးလို့ ၀၀၀ ဖြင့် ဝေးဝေးဝိုက် သွားပါကြောင်း….
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ.ပတ်သက်ပီး မြန်မာပြည်သူအများစုရဲ့သဘောထားကို ခင်ဗျား
ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာ နောက်များမှ ပြောပါလား။လောလောဆယ် ဘယ်လိုပြောပြောလက်ခံမှာ မဟုတ်ဖူး